Global Voices teny Malagasy » Mety Hiatrika 25 Taona An-tranomaizina Ilay Bilaogera Alzeriana Merzoug Touati Noho Ny Antsafa Nataony Tamin’ny Manampahefana Israeliana Tao Amin’ny YouTube · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Febroary 2017 6:53 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Alzeria, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Niampanga  an'i Merzoug Touati, bilaogera, tamin'ny “fanomezam-baovao fitsikilovana ho an'ny firenen-kafa”, tao amin'ny lahatsarin'ny antsafa nalefa ho an'ny daholobe izay nifanaovany tamin'ny mpitondratenin'ny Minisiteran'ny Raharahambahiny Isiraeliana ny manampahefana Alzeriana.
Nosamborin'ny Polisy tamin'ny 18 Janoary i Touati, ary nalainy ny solosaina sy ny fakantsariny, araka ny Ligy Alzeriana miaro ny Zon'Olombelona (LADDH)  . Ny mpisolovavan'ny vondrona no nisolo tena an'i Touati tany amin'ny fitsarana.
Nilaza tamin'ny tranonkalam-baovao Alzeriana  El-Watan ny mpisolovavan'ny LADDH Ikken Sofiane fa voampanga eo ambanin'ny Fehezan-dalàna famaizana andininy faha-71 i Touati , izay manome ny sazy an-tranomaizina hatramin'ny 20 taona ho an'izay rehetra voampanga ho nanao “fiseraserana miaraka amin'ny iraky ny mpitsikilon'ny firenenkafa izay mety hanimba ny tafika na ny diplaomasia ao Alzeria na ny tombontsoa iankinan'ny ain-dehibe ara-toekarena. “
Tamin'ny 9 Janoary, namoaka lahatsary antsafa tao amin'ny YouTube  sy tao amin'ny bilaoginy Alhogra  i Touati izay nifanaovany tamin'i Hassan Kaabia, mpitondratenin'ny minisiteran'ny raharahambahiny Isiraeliana ho an'ny fampitam-baovao mpiteny Arabo . Nifantoka tamin'ny valintenin'ny vahoaka momba ny teti-bolam-panjakana taona 2017 ny antsafa, izay ahitana ny fitomboana amin'ny hetran'ny vola miditra, ny hetran-karama sy ny hetran'ny fananana mifaka, ary nahitana fihenana teo amin'ny fanampiana ara-bola amin'ny solika. Nipoaka ny fitokonana sy ny korontana  tany amin'ny faritany avaratr'i Bejaia sy tany amin'ny faritra hafa tao amin'ny firenena rehefa nanomboka nanan-kery tamin'ny 1 Janoary ny lalàna.
Nilaza tamin'i Touati ihany koa i Kaabia fa nisy ny “fifandraisana” teo amin'ny fitondram-panjakana Alzeriana sy ny fitondram-panjakana Isiraeliana talohan'ny taona 2000, saingy tsy afaka manamafy izy raha nampiantrano birao diplaomatika misolontena an'Isiraely teo aloha i Alzeria . Tsy mankatò  na manana fifandraisana ara-diplaomatika  amin'ny fomba ofisialy amin'Isiraely noho ny fibodoana ireo faritany Palestiniana i Alzeria sy ny governemanta ao amin'ny Ligy Arabo ankoatra an'i Egypta sy i Jordania . Na dia izany aza, nametraka zotra ny nampiatrano birao misolontena an'i Israely ny fitondram-panjakana sasany amin'izao fotoana izao na teo aloha. Tazonin'ny governemanta Arabo ho tsiambaratelo ny fifandraisana toy izany noho ny fanohanam-bahoaka ireo Palestiniana ao amin'ny faritra.
Ao amin'ny bilaoginy Alhogra, nanangom-baovao hatrany ireo fitokonana manohitra ny fifehezan-kibo sy ny hetsi-panoherana miompana amin'ny asa i Touati , ary ataony toy izany ihany koa ny fanakitsahana zon'olombelona ataon'ny manampahefana Alzeriana. Tamin'ny 22 Novambra, nandefa  ny antsafa nifanaovana tamin'i Tilelli Bouhafs izy, manefa sazy  telo taona an-tranomaizina ny rain'ity olona nifanaovany antsafa farany ity amin'izao fotoana izao noho ny fiampangana faniratsirana ny Islamo tao amin'ny lahatsorarany an-tserasera, antsoina hoe Slimane Bouhasf izany rainy izany.
Amin'izao fisamborana an'i Touati izao, manohy ny famoretana ireo mpitsikeran'ny governemanta sy ireo mampihatra am-pilaminana ny zony hiteny malalaka an-tserasera i Alzeria . Tamin'ny volana Desambra 2016, nahafaty  ilay bilaogera Mohammad Tamalt izay tsy nahatsiaro tena rehefa avy nanao fitokonana tsy nihinan-kanina nandritra ny roa volana ho fanoherana ny fanagadrana azy noho ny famoahana tao amin'ny Facebook tononkalo mitsikera ny filoha Alzeriana Abdelaziz Bouteflika io fanentanana io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/02/06/95080/
 Ligy Alzeriana miaro ny Zon'Olombelona (LADDH): https://fr-fr.facebook.com/said.salhi/posts/10155672656364256
 fitokonana sy ny korontana: http://observers.france24.com/en/20170106-riots-overtake-peaceful-protest-algerian-shopkeepers
 fifandraisana ara-diplaomatika: http://mfa.gov.il/MFA/AboutTheMinistry/Pages/Israel-s%20Diplomatic%20Missions%20Abroad.aspx
 manefa sazy: https://globalvoices.org/2016/09/08/algerian-court-upholds-conviction-of-activist-jailed-for-insulting-islam-on-facebook/